Ny fanjakan'ny finday any Etazonia | Martech Zone
Ny fanjakan'ny finday any Etazonia
Talata, Martsa 11, 2014 Zoma, Martsa 14, 2014 Douglas Karr
Mitombo hatrany ny fampiasana finday eo amin'ireo mpanjifa. 74% ny fitomboana dia tamin'ny finday finday misy 79% ny US Shoppers mizaha sy miantsena amin'ny tranokala sy fampiharana. Amin'ny taona 2016 dia mahatratra 46 miliara dolara ny vola miditra amin'ny finday. Mba hamaritana ny dikan'ity fiovana manaitra ity amin'ny marika ho an'ny olona Usablenet manambatra infographic izay mampiseho ny habetsaky ny fampiasana Internet amin'ny finday manova ny fomba fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny marika amin'ny Internet.
Usablenet dia mampiasa tranokala finday sy traikefa multichannel ho an'ny mpanjifa 400 mahery, ao anatin'izany ny maro amin'ireo mpivarotra enta-madinika, fitsangatsanganana ary serivisy.
Tags: ny fihenan'ny fiovamfironana fivarotana fialantsasatrafetyMobile Appsvarotra findaytranonkala findayfialantsasatra amin'ny fiantsenana an-tseraseravarotra takelakatakela-batonandany fotoana
Tsy nampianatra an'izany velively tao amin'ny kilasy marketing izy ireo
Ny fotoana fanararaotana Marketing Beacon